Edge Chromium ichauya kuLinux, heino humbowo hutsva | Linux Vakapindwa muropa
Zviratidzo zvitsva zvekuti Microsoft Edge Chromium iri kuuya kuLinux
Pave nemwedzi kubva pakataurwa nezve Microsoft Edge Chromium, vhezheni itsva yebrowser iri muWindows iyo ichave inoenderana neGoogle injini. Ikozvino inowanikwa mune beta vhezheni uye izvo zvatinoyedza panguva ino zvakafanana neChromium, zvakanyanya zvekuti ivo vakabvisa sarudzo senge kudhirowa uko kunowanikwa mune yakajairwa vhezheni. Iyo parizvino inowanikwa yeWindows (sa7) uye yemacOS, asi zvinoita sezviri pachena kuti ichakurumidza kusvika paLinux.
Ivo vachangobva kutaura kuti Edge Chromium yaizouya kuLinux "Pakupedzisira" uye nezuro, nhengo yeMicrosoft Edge timu yekuvandudza yakataura izvozvo ivo vari kushanda pazviri. Muchokwadi, kune ongororo (inowanikwa pano) yevagadziri iyo yavanobvunza zvinhu senge zviyero zvipi zvavanoshandisa kana izvo mabhurawuza anowanzo shandiswa muLinux.
Ongororo inowanikwa yekuziva mashandisiro atingaite Edge Chromium
Isu, timu yekuvandudza yeMicrosoft Edge, tiri kuvandudza zvinodiwa kuti uunze Edge kuLinux, uye isu tinoda rubatsiro rwako nezvimwe zvekufungidzira! Kana iwe uri mugadziri anovimba neLinux mukusimudzira, kuyedza, kufamba wega, ndokumbira utore wechipiri kuzadza iyi ongororo!
Hapana chinhu chiripo parizvino cheLinux, asi kana tikabatanidza zvavakataura mwedzi yapfuura nezvavakataura nezuro, kusanganisira ongororo, zviri pachena kuti nguva ichauya iyo iyo Chromium-based vhezheni yeEdge ichasvika, kana kudaro, icha kuve unowanikwa kuti uishandise pamakomputa edu. Iko hakuna mashoma maChromium-based mabhurawuza ayo anowanikwa kwatiri, pakati payo isu tine Opera kana Vivaldi uye chero chero chero browser kunze kwe Firefox, ndosaka ini pachangu ndichipokana kuti iyo Chromium vhezheni yeEdge ichawana mugove mukuru wemusika pakati pevashandisi veLinux.
Ungave uchifarira kushandisa Edge Chromium paLinux?
Microsoft inoshandisa Chromium sehwaro hweinjini yeEdge
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zviratidzo zvitsva zvekuti Microsoft Edge Chromium iri kuuya kuLinux
Iyo itsva vhezheni yeLLVM 9.0 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo